RASMI: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Uu Kooxdeeda Ka Baxay Xidig Ay Isku Khilaafeen Florentino Perez Iyo Zinedine Zidane. - Gool24.Net
RASMI: Real Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Uu Kooxdeeda Ka Baxay Xidig Ay Isku Khilaafeen Florentino Perez Iyo Zinedine Zidane.
Kooxda Real Madrid ayaa hadda war saxaafadeed rasmi ah ku shaacisay in wiilkii uu dhalay tababaraha kooxdeeda ee Luca Zinedine Zidane in uu amaah ku baxay inkasta oo ay hore xaaladiisa iskugu khilaafeen madax wayne Florentino Perez iyo tababare Zidane.
Warbaahinta Spain ayaa hore u shaacisay in Zinedine Zidane uu doonayay in wiilkiisa goolhayha ah ee Luca Zinedine Zidane uu kooxdiisa sii joogo isla markaana uu ka dhigto goolhayaha doorashada labaad ee ku soo xiga Courtois.
Laakiin Florentino Perez iyo Zidane ayaa markaas la sheegay in ay ku kala fikrad duwanaadeen iyada oo waliba su’aalo badan Zidane arintan laga waydiiyay kulamadii ugu danbeeyay ee xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Luca Zidane ayaan ku soo bixin liiskii ciyaartoyda Real Madrid ee uu aabihii maanta ula safray dalka Canada, waxaana hadda la dhamaystiray heshiiska amaahda ah ee uu ugu biiray kooxda Real Racing Club Santander.
War saxaafadeed ka soo baxay Real Madrid oo heshiiskan loogu dhawaaqay ayaa lagu yidhi: “Kooxda kubbada cagta Real Madrid iyo Real Racing Club Santander waxay ka heshiiyeen amaahda Luca Zidane ee xili ciyaareedka soo socda ee heshiiska dhacaya June 30,2020”.
Luca Zidane ayaa la raaciyay nadiifinta Santiago Bernabeu uu Florentino Perez ka wado iyada oo xidigo badan la diray maalmihii la soo dhaafay laakiin waxaa wali jira ciyaartoy badan oo aan ku jirin qorshaha Zidane oo ay Madrid doonayso in ay amaah ama iib ku dirto.
Zidane ayaa hore ugu dooday in wiilkiisa Luca Zidane aanu ku difaacayn waalidnimo balse uu ku difaacayay waxa uu kooxda ku soo kordhin karo iyo tayada uu soo muujiyay balse hadda Zidane ayaa ogolaatay in wiilkiisu uu amaah ku baxo.
Inkasta oo Luca Zidane hadda amaah lagu bixiyay, Real Madrid ayaan wali wax dalabyo ah u helin goolhaye Keylor Navas kaas oo ka mid ahaa afar goolhaye oo uu maanta Zidane ula safray Canada balse aan qorshihiisa xili ciyaareedka cusub ku jirin.
Si kastaba ha ahaatee, isku daygii uu Zidane ku doonayay in wiilkiisa Luca Zidane uu kooxda kowaad kula shaqeeyo ayaa soo dhamaaday iyada oo hal xili ciyaareed oo amaah ah uu ku maqanaan doono.